Cameroon: Ophthalmic Kuchengetedza Adamaoua Populations - TELES RELAY
HOME » MUTSVENE HURUMBA »Cameroon: Ophthalmic Care for Adamaoua Populations
Raparurwa musi January 02 2019 kuti Islamic kiriniki yekupokana Hospital pamusoro Ngaoundere, mushandirapamwe, iyo inoguma musi January 6 yakagadzirirwa ishande vakasununguka 300 vanhu vachitambura kubva cataract.
IAdamaoua nzvimbo imwe yezvikamu zveCameroon apo nyanzvi dzezvirwere zveziso hazviti kumigwagwa. Vanhu vanowanzomanikidzwa kuenda kuLagdo kana kuti Mayo-Oula kuti vaongororwe kune dzimwe nyaya dzakadai sedambudziko.
Chimwe chinokonzera kukanganisa muCameroon, cataract chimwe chezvirwere zvinokanganisa vanhu muAdamawa.
Vanhu venharaunda vanotarisira kuburikidza nemushandirapamwe wekuchengetedza vakasununguka kubatsirwa nekubvunzurudzwa uye kugamuchira kurapa kwakakwana.
"Ndiyo nzira yakanaka yevashandi vehurumende. Ndine ruzha kubva pahutano hwemaziso angu. Kuburikidza nemushandirapamwe, ndinotarisira kuti ndichaziva zvandiri kutambura kubva. Nguva ipi zvayo pandinouya kuchipatara, chiremba dzimwe nguva ari kutama sezvo vanhu vemunda vakaita saiye vasiri vazhinji ipapo. Uyu mushandirapamwe chinhu chakanaka kwandiri, chinogona kundibvisa '', anobvuma Moussa, anogara mudunhu reMarza.
nyaya iyi cataract kushanda rutsigiro, danho 2 Turkish NGOs uye British kutungamirira mumazuva ano mawa yokubvunza vechiIslam kurapwa uye Ngaoundere yeRoma Hospital. Zvichisanganisa 6 ophthalmologists vane vavatorwa Cameroon 2 4 kuvasunungura varwere vakawanda.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/01/06/cameroun-des-soins-ophtalmologiques-pour-les-populations-de-ladamaoua/
Cameroon: Kiraera inokonzera 58 yakafa
pasi rose14 143
VANHU & VANHU11 976
Vhidhiyo yakawanda2 362
Gweta uye Mutengesi pa Craigslist
MuUnited States, inonyangarika inoratidzirana ne "shutdown"
Mukoti anopomerwa kuti akaisa mukadzi mumunda wezvinomera uyo akabereka
VIDEO - MuJapan, hoteri ye robot inoshandura droids yayo uye inodzokera kumunhu
Reux: Basa rekudzorera chechi rinopfuurira mu 2019